Slovakia: Ireo fitsangatsanganan-tsekoly Hongroazy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jolay 2010 12:20 GMT
Tamin'ny fotoan'ireo olana ara-toekarena, nangataka ireo Italiana ny hanao ny fialan-tsasany ao amin'ny taniny ihany, ny Praiministra Italiana. Anatina tranga toy izay ihany koa, nandray lamina hafa ny parlemanta Hongrois (SLO):
Ny antoko Hongroa Fidesz mitantana dia nampiditra volavolan-dalàna any amin'ny parlemanta izay hanome famatsiam-bola ho an'ireo fitsangatsanganan-tsekoly any amin'ny faritr'ireo firenena manodidina izay an'i Hongrie ihany taloha . Amin'ny maha anisan'ny iray amin'ireo mpametraka ny volavolan-dalàna azy, ny filohan'ny komitin'ny parlemanta misahana ny fampianarana, milaza i Zoltán Pokorni, fa tokony hatao amin'ny tsingerintaonan'ny Jona 1920 [Fifanarahan'i Trianon] izany, izay “nanalàna ireo faritra ireo tamin'i Hongrie .” Natao hanamora ny fifanakalozana eo amin'ireo sekoly Hongroazy any ivelany sy any Hongrie izany fandaharam-potoana izany . Araky ny hevitr'i Pokorni, amin'ny alalan’ ireo fitsangantsanganana, mila fantatr'ireo mpianatra ny fiainan'ny Hongroa any amin'ireo faritra “taloha ” ireo amin'izao fotoana izao .
Ireto ambany ireto misy ireo hevitra vitsivitsy avy amin'ireo Slovaky mponin'ny aterineto mikasika ireo dingana farany nataon'ny Hongroa . Azafady mba hanamarika fa tsy voamarina ireo isa lazaina ireo. Mba jereo ihany koa fa ao amin'ny fomba fiteny Slovaky, misy fahasamihafana eo amin'ny Hongrie taloha (Uhorsko), fanjakana manana foko maro izay nahitàna ny antsasak'ireo mponinaireo Hongroa (jereo saritanin'i Spectre Hongroa), ary ny faritry ny Repoblikan'ny Hongrie ankehitriny (Maďarsko). Ny zavatra mahaliana ihany koa, dia tsy manana dikany any Hongrie ny anaran'ny fianakaviana Pokorni, fa any Slovakia kosa, midika hoe “manetry tena” ny hoe “pokorní” izay manondro kokoa ny Slavy, raha tsy hoe manana fiaviana Slovaky avy hatrany.
Mihevitra izany ho fandranitana fahatany aho. Mety tsy manana fandaharam-potoana tena matotra i Fidesz. Mitovy amin'ny zavatra fahatany toy ny nanapahan i [Ján Slota] hevitra hanao soso-kevitra hoe ny fanjakana hanohana ny fitsidihan'ireo mpianatra Slovaky any amin'ny farihin'i Blatenske (Manome anarana an'izany hoe [Balaton] ny olona sasany), izay tao amin'ny [fari-piadidian’ i Nitra ] na Great Moravia.
Miaraka amin'ny anarana toy ny hoe Zoltan Pokorni, tokony hanao fitsangatsanganana mikasika ny [fahafantarana lalina] ireo firenena tsy Hongroa ho an'ireo Hongroa tamin'ireo taona lasan'ny Hongrie Lehibe ry zareo.
Ity no olana lehiben'ny [Praiministra Orban] : Nahazo fampindramam-bola amin'ny trano, fiara, na izay rehetra ilaina tamin'ny vola Euro na farantsa Soisa ny mponina Hongroa. Ato anatin'ny taona vitsy ho avy, mila mampihena ny sandan'ny Forint […] izy hitantanany ireo fanovàna. Ary izany no olana – tsy maintsy mamerina indroa ny sandan'izay nindraminy ireo nanao findramam-bola tamin'ny vola vahiny […]. Izay no mahatonga an'i Orban hitady ireo lohahevitra hanaronana ireo trosa hoavy sy ny fampihenam-bidy ny Forint. Ireo fitsangatsanganan-tsekoly: rahon-tsetroka ho an'ireo mpifidy fotsiny izany .
Makedonia 23 ora izay